Inkonzo Yamakhasimende | Shandong Dingtaisheng Imishini Technology Co., Ltd.
Ukuhlelwa kwesiza nokwakhiwa kohlelo
Ngokwesidingo samakhasimende, nikela ngezixazululo zobuchwepheshe ezihlosiwe, ezisebenza kahle, imishini yokuvala inzalo esekela izakhiwo zokuhlela okunemininingwane.
I-DTS inethimba layo ngemuva kokuthengisa, singanikeza ngezinsizakalo ezijwayelekile zokugcinwa kwamakhasimende. Lapho okokusebenza kwakho kunezinkinga, onjiniyela be-DTS abasebenza ngemuva kokuthengisa bangakwazi ukukuhlonza futhi bakuqondise ekuxazululeni izinkinga ukude. Uma ikhasimende lingakwazi ukufaka ezinye izingxenye zalo, i-DTS ithembisa ukufika esiteshini kungakapheli amahora angama-24 esifundazweni sethu nangamahora angama-48 ngaphandle kwesifundazwe.
I-DTS inelabhorethri yokuhlola. Lezi zakhiwo zikulungele ngokuphelele ukukhiqiza kabusha izimo eziqondile zokukhiqizwa kwezimboni.
Uzothola usizo kochwepheshe bethu bokuvala inzalo kanye nabachwepheshe bezokudla, futhi uzokwazi uku:
- Ukuhlolwa nokuqhathanisa ukugeleza kwenqubo nokusetshenziswa (izinhlelo ezi-static, ezijikelezayo, ezinyakazayo)
- Zama uhlelo lwethu lokulawula
- Setha inqubo yokuvala inzalo (i-test retort) ifakwe ithuluzi lokubala le-F0)
- Hlola ukupakisha kwakho ngenqubo yethu yokugeleza
- Linganisa ikhwalithi yokudla yemikhiqizo eqediwe
Ngosizo lozakwethu, amayunithi wokuhlola asetshenziswa nasekwakhiweni kwemishini yezimboni, njengokugcwalisa, ukufaka uphawu izinkampani nokupakisha.
Ukuhlolwa komkhiqizo, ukuthuthukiswa kwefomula yobuchwepheshe
Ngabe udinga ukwakha iresiphi yokucubungula okushisayo?
- Usube ngumnikazi oziqhenyayo we-DTS Retorts?
- Ngabe ufuna ukuqhathanisa izindlela zokwelashwa ezahlukahlukene futhi uthuthukise izindlela zakho zokuvala inzalo?
- Ingabe uhlakulela uchungechunge lomkhiqizo omusha?
- Ingabe ufuna ukushintsha ukupakisha okusha?
- Ngabe ufuna ukukala inani le-F? Noma nganoma yisiphi esinye isizathu?
Bonke abasebenzi bakho bangazuza ekuqeqeshweni okuguqukayo ezindaweni ezahlukahlukene
Ukusetshenziswa kwe-retort, okulungele abaqalayo, abanolwazi noma abasebenzi bezinga elithile
Izinsizakalo zethu zingaqhutshwa emagcekeni akho noma esivivinyweni sethu se-LABS, esenzelwe ukwamukela abafundi futhi sibenze bakwazi ukuhlanganisa ulwazi lwethiyori kanye nolwazi olusebenzayo.Ochwepheshe bethu bokulungisa ukushisa bazokusiza futhi bakuqondise kulo lonke uqeqesho lwakho. imiphumela yokuhlolwa kusayithi lakho lokukhiqiza lezimboni.Akho isigaba sentuthuko esivimba imishini yakho yezimboni, ekuvumela ukuthi wonge isikhathi, wandise ukuguquguquka, futhi uqhubeke nokukhiqiza ngenkathi uqeqeshwa.
Ngaphandle kwalokho, singazenzela lonke uvivinyo ebhodini bese silandela izeluleko zakho.Udinga nje ukusithumela isampula lomkhiqizo wakho futhi sizokunikeza umbiko ogcwele ekupheleni kovivinyo.Lonke ulwazi olushintshiwe luphathwa njengemvelo okuyimfihlo ngokuphelele.
Ukuqeqeshwa esitshalweni sethu
Sinikeza ukuqeqeshwa esitshalweni (ukugcinwa njalo, ukugcinwa kwemishini,
amasistimu wokulawula nokuphepha ...), inqubomgomo yokuqeqesha eyenzelwe ukuhambisana nezidingo zakho.
Elabhorethri yethu, singanikeza izikhathi zokuqeqesha opharetha bakho be-retort.
Bangakwazi ukusebenzisa i-theory ngokushesha ngesikhathi seseshini.
Ukuqeqeshwa endaweni yamakhasimende
Siyasazi isizinda sokulungisa izinto, futhi siyazi ukuthi lapho okokusebenza kwehla, kukubiza imali eningi. Ngenxa yalokhu, i-DTS isebenzise ukwakheka okuqinile nezakhi kuyo yonke imishini yethu. Ngisho nemishini yethu yelabhorethri nocwaningo ikhiqizwa ngezingxenye zebanga lezimboni. Ngephakethe lethu lokulawula eliphambili, ukuxazululwa kwemishini eminingi kungenziwa nge-elekhthronikhi nge-modem, kepha-ke, uma udinga ukwesekwa kwezitshalo, ngisho nezinhlelo ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusekelwa azithathi indawo yokuba nesazi se-DTS noma unjiniyela esizeni. Abasebenzi bethu bangakusiza ukubuyisa umshini wakho futhi usebenze.
● Ukusatshalaliswa kwezinga lokushisa nokungena kokushisa
Ku-DTS, kubalulekile ukuthi sisize amakhasimende akhethe ukubuyisa okufanele bese sisebenza nawo ukwenza ngcono ukusetshenziswa, ukusebenza nokugcinwa kwemishini.Sisebenza ngokubambisana nabagunyazi bezinqubo zokwelashwa kokushisa kwangaphakathi kanye / noma ukwelashwa kwabo kwangaphandle kokushisa cubungula ababonisi ukuqinisekisa ukuthi i-retort yethu iyasebenza futhi isebenza ngendlela ephephe kakhulu, esebenza kahle kakhulu futhi esebenza kahle.
Uma imikhiqizo yakho izothunyelwa e-United States, noma uma okokusebenza kungokokuqala ukufakwa, noma uma i-retort yakho ilungiswa kakhulu, kuzodingeka wenze ukusatshalaliswa kokushisa nokungena kokushisa.
Sinayo yonke imishini edingekayo ekuhlolweni okunjalo.Sithenge imishini ekhethekile yokulinganisa (kufaka phakathi abagawuli bedatha) kanye nesoftware yokuhlaziya idatha ukwenza izivivinyo ngendlela efanele ngaphansi kwezimo ezikahle ngokuya ngezidingo zakho futhi sikunikeze imibiko yokujula nokuningiliziwe.
Kusukela yasungulwa, i-DTS isebenzele imboni yokucubungula ukudla, ihlinzeka ngezinsizakalo kubaprosesa bokudla okune-asidi ephansi (i-LACF) neziphuzo ukubasiza ukuthi basungule izinqubo nezinqubo ezilandelwayo zokuphepha kokudla.Ithimba lobuchwepheshe elinolwazi le-DTS kanye nabalingani bamazwe omhlaba linikeza okuphelele kakhulu izixazululo zokucubungula ezishisayo kanye nezinsizakalo kumakhasimende asetshenziswayo amasha nalawo asanda kwenziwa.
● Ukwamukelwa yi-FDA
Ukulethwa kwefayela le-FDA
Ubungcweti bethu nokusebenza ngokubambisana nabalingani bamazwe aphesheya abakhethekile ekulethweni kwezinsizakalo ze-FDA kusenza sikwazi ukulilawula ngokugcwele lolu hlobo lwemishini. Kusukela yasungulwa, i-DTS isebenzele imboni yokucubungula ukudla, ihlinzeka ngezinsizakalo kubaprosesa bokudla okune-asidi ephansi (i-LACF) neziphuzo ukubasiza ukuthi basungule izinqubo nezinqubo ezilandelwayo zokuphepha kokudla. izixazululo zokucubungula ezishisayo kanye nezinsizakalo kumakhasimende asetshenziswayo amasha nalawo asanda kwenziwa.
Ukuhlolwa kokusetshenziswa kwamandla
Namuhla, ukusetshenziswa kwamandla kuyinselele kuwo wonke amazinga. Ukuhlolwa kwezidingo zamandla akunakugwemeka namuhla. Ukuze kusebenze kahle, ukuhlolwa kufanele kwenziwe esigabeni sokuqala sephrojekthi.
Kungani udinga ukuhlolwa kwamandla?
- Ukuchaza izidingo zamandla,
- Chaza izixazululo ezifanelekile zobuchwepheshe (ukusebenzisa isikhala, izici zobuchwepheshe, izinga lokuzenzekelayo, iseluleko sochwepheshe ...).
Inhloso enkulu ukukhulisa nokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla kuyo yonke indawo, ikakhulukazi emanzini nasentuthu, okuyinselelo enkulu yokusimama yekhulu lama-21.
I-DTS iqongelele ubuchwepheshe obuqinile ekwehliseni izindleko zamandla. Izixazululo zethu zisiza amakhasimende ethu anciphise kakhulu ukusetshenziswa kwamanzi namanzi.
Ngokuya ngokuhlola, isilinganiso sephrojekthi yokubuyisa, sihlanganiswe nezimo zokusebenza zangempela zesayithi lamakhasimende, singanikeza amakhasimende izixazululo eziyinkimbinkimbi noma ezilula.
Sishayele +86 536-6549353